UFedora Wethula iKinoite iSilverblue Counterpart nezinhlelo Zokuthuthela I-FreeType kuHarBBuzz | Kusuka kuLinux
Abathuthukisi beFedora bakhululiwe muva nje wethule uhlelo olusha lweFedora, olubizwa nge- «I-Kinoite» esekwe kubuchwepheshe beFedora Silverblue, kepha ngisebenzisa i-KDE esikhundleni se-GNOME njenge-desktop.
Isithombe se-monolithic Fedora Kinoite asihlukanisiwe saba ngamaphakeji ahlukile, sibuyekezwa nge-athomu futhi sakhiwe kusuka ku-Fedora RPMs asemthethweni sisebenzisa i-rpm-ostree toolkit.
1 Mayelana noFedora Kinoite
1.1 IFedora 34 ihlela ukuthuthela iFreeType iye eHarfBuzz ukuthuthukisa amacebo
Mayelana noFedora Kinoite
Lolu hlobo olusanda kukhishwa lweFedora Kinoite ivelela ukwethula indawo eyisisekelo (/ kanye / usr) kufakwe njengokufunda kuphela.
Imininingwane etholakalayo yokuguqulwa itholakala kumkhombandlela we / var (kufaka phakathi / njll kudalwe njengesixhumanisi esingokomfanekiso ku- / var / etc, / home as a link to / var home, and / opt as a link to / var / opt).
Ukufaka nokuvuselela izicelo ezingeziwe, kusetshenziswa uhlelo lwephakethe le-flatpak elizimele, Izicelo ezisuswe kusistimu enkulu futhi ziqhutshwa esitsheni esihlukile, kanye nezinhlelo zokusebenza ezingeziwe zingafakwa kusuka kuFlathub, kepha umsebenzi uyaqhubeka wokwakha amaphakheji asemthethweni weFlatpak weFedora ngezinhlelo ze-KDE.
Le phrojekthi ayikasitholi isimo sokubuyekezwa okusemthethweni kweFedora futhi usezinhlelweni zentuthuko.
Kukhulunywa ukuthi kuhlelwe ukuthi inguqulo yokuqala isilungile ngesikhathi i-Fedora 35 yakhiwa, kepha izinhlobo zezilingo sezivele zitholakalele ukubuyekezwa.
Azikho izithombe ezenziwe ngomumo okwamanje, futhi ukufaka i-Fedora Kinoite, kuphakanyiswa ukufaka i-Fedora Silverblue kuqala bese ubuyisela ideskithophu nge-KDE ngokusebenzisa imiyalo elandelayo:
Ukuvuselela isistimu yesisekelo namaphakeji we-flatpak, udinga ukusebenzisa imiyalo (asikho isikhombimsebenzisi sokuqhafaza esizovuselelwa okwamanje):
Uma ufuna ukwazi kabanzi ngayo mayelana neFedora Kinoite ungabheka imininingwane Kulesi sixhumanisi esilandelayo.
IFedora 34 ihlela ukuthuthela iFreeType iye eHarfBuzz ukuthuthukisa amacebo
Ngaphezu kwalokho, abathuthukisi beFedora nabo bakushilo lokho injini yeFreeType izosetshenziselwa uhlobo lweFedora 34 I-Fedora 34 ihlelile amafonti wokudlulisa ukusebenzisa ama-glyphs Injini Yokwakha ye-HarfBuzz.
Iphakheji ye-freetype-harfbuzz inikezwe ukuhlolwa kuFedora Rawhide. Ushintsho alukabuyekezwa okwamanje yiFedora Engineering Steering Committee (FESCo), ebhekele ukuthuthukiswa kobuchwepheshe bokusatshalaliswa kweFedora.
Noma, kusetshenziswa iHarfBuzz kuFreeType ukuthi kuthuthukiswa ikhwalithi yeziphakamiso (bushelelezi uhlaka lwe-glyph lapho ilungiswa ukuze kuthuthukiswe ukufundeka ezikrinini zokuxazulula okuphansi lapho kukhonjiswa umbhalo ngezilimi ezinokuhlelwa kombhalo okuyinkimbinkimbi, lapho ama-glyphs angakhiwa kusuka kuzinhlamvu eziningi.
Ikakhulu, ukusetshenziswa kweHarfBuzz kuzoqeda inkinga yokungazinaki lapho ukhomba kuma-ligature angenazo izinhlamvu ezihlukile ze-Unicode. Njengesikhumbuzo, ukuhunyushwa konyaka odlule komtapo wolwazi wePango ukusebenzisa iHarBBuzz kudale izinkinga zokubonisa amafonti amadala.
Ngokwengeziwe, Qaphela ukuvunywa kweKomidi le-FESCo lazo zonke izinhlobo ze-Fedora ukusebenzisa inqubo ye-systemd-oomd ngempendulo yokuqala yokuphuma kwimemori ohlelweni esikhundleni senqubo esetshenzisiwe yangaphambilini.
I-Systemd-oomd isuselwa kuhlelo olungaphansi lwe-PSI kernel (Pressure Stall Information), evumela isikhala somsebenzisi ukuthi sihlaziye imininingwane mayelana nesikhathi sokulinda ukuthola izinsiza ezahlukahlukene (i-CPU, inkumbulo, i-O / O) ukuhlola ngokunembile izinga lokusetshenziswa kohlelo nobunjalo bokuncipha.
I-PSI yenza sikwazi ukubona ukwenzeka kokubambezeleka ngenxa yokushoda kwezinsizakusebenza nokunquma ngokukhetha umsebenzi wezinqubo ezisebenzisa kakhulu izinsiza esigabeni lapho uhlelo lungakabi sesimweni esibucayi futhi lungaqali ukusika kakhulu isilondolozi noma ukuthumela idatha ekwahlukanisweni okushintshanayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Izaziso » UFedora wethula umlingani wakwaKinoite weSilverblue futhi uhlela nokuthuthela iFreeType iye eHarfBuzz
I-Elasticsearch ifudukela kwilayisense ye-SSPL engekho mahhala